Itoobiya: Waan ka feejiganahay Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
18th October 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Wasaaradda arrimaha dibbadda dalka Ethiopia ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay inay ka hortagtay weeraro Al-Shabab la maaganayeen magaalooyin dalkaas, sida warka lagu yiri.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibbadda Ethiopia oo la yiraahdo danjire Taye Atske Selassie ayaa Addis-Ababa ka sheegay in hay’adaha amaanka dalka Ethiopia ay ka hor tageen weeraro Al-Shabab la maaganayeen inay ka geystaan magaalada Addis-Ababa iyo magaalooyin kale oo Ethiopia ku yaala sida uu yiri.
Afhayeenkaan waxaa uu sheegay in ayagoo ka jawaabaya digniintii safaaradda Maraykanka ay qaadeen tilaabooyin ay amaanka ku sugayaan sida uu yiri.
“Amaanka hadda waa uu sugan yahay waxaana ka hor tagnay amaanka caasimada iyo dalkoo dhan ayaana illaanaynaa” ayuu yiri Taye Atske Selassie oo u hadlay wasaaradda arrimaha dibbadda Ethiopia. Sargaalkaan waxaa uu sidoo kale sheegay inay jiraan Soomaali ay xir xireen inkastoo uusan tiradooda carab baabin.
Itoobiya ayaa sidoo kale sheegeysa iney qaadeyso tilaabooyin dheeraad ah oo amaanka lagu sugayo, islamarkaana ay la tahay inaa Alshabaab awoodin iney dalkaas weeraraan.
“Waxaan jecelnahay in aan u cadaynno wadamada aan xiriirka wadaagno in aan qaadeynno tallaabo kasta oo looga hortagayo in Al-shabaab ay amniga dhibaateeyaan, waliba Addis Ababa oo kaliya maahan ee waa dalka oo dhan,“ ayuu yiri Taye Atske Selassie.
Safaaradda Maraykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa asbuucii la soo dhaafay soo saartay digniin ku aadan suurtagalnimada ay Al-shabaab ku beegsan karaan goobaha ugu shacbiyadda badan ee Addis Ababa sida Hoteellada iyo meelaha kale ee laga adeegto.